Idivayisi yokuqothula amanzi → Izisabalalisi zamanzi ezingenawo uMbhalo
Ziyanda izinkampani amahhovisi, amahhovisifuthi ngingenile izindlu kwangasese kuvela izitsha zamanzi ezikhazimulayo. Isimanje ithuluzi lamanzi we-gassing ihlinzeka ngamanzi okuphuza amasha futhi anamnandi okubandayo, okushisa nokushisa kwegumbi, ngokuya ngemodeli yedivayisi ekhethiwe kanye nezidingo zabantu abazisebenzisayo.
Umhlinzeki wamanzi we-Carbonated Iphelele ezindaweni zombili ezivulekile, ezindaweni zokusebenza ezivaliwe nasezikhungweni zomphakathi, kanye nasemakhaya abantu, okusho ukuthi noma yikuphi lapho amanzi asezingeni eliphakeme abalulekile.
Abakhiqizi bezindawo zokuhambisa amanzi okuphuza ezitholakala emakethe balwela ukuthola izinga eliphezulu kakhulu nokunambitheka kwamanzi alungiselelwe ngokusebenzisa izixazululo ezintsha zobuchwepheshe. Ngasikhathi sinye, banakekela nokwakhiwa kwesimanje kwedivayisi okuzongena kunoma iliphi igumbi. Inzuzo eyengeziwe yamadivayisi avezwe lapha amanzi i-carbonated futhi ukusebenza kwabo okuphezulu.
Ngokuya ngezidingo zakho, singakhetha kumadivayisi aphezulu wesigaba esiphezulu ukulungiselela amanzi acwebezelayo:
Isaphulelo sokuhambisa amanzi samahhala se-Hi-Class silinda
Isaphulelo sokuhambisa amanzi samahhala se-Hi-Class silinda lwenziwe futhi lwenzelwe ukusetshenziswa ezinhlobonhlobo zezangaphakathi, lapho kungeyona into yokusebenza kuphela, kodwa futhi luhlobisa nendawo lapho ibekwe khona.
Izisombululo zanamuhla zobuchwepheshe ezisetshenziswa ekwakhiweni nasekwenzeni le divayisi kanye nasekusetshenzisweni kwekhwalithi ephezulu kakhulu yokukhiqiza kwalo kuqinisekisa ukusebenza okuthembekile komsabalalisi kanye nokusebenza kwayo okuphezulu.
Isitsha sokuhambisa amanzi se-Hi-Class singalungiselela amanzi afinyelela kumakhaza angama-45 ngehora size sifike kumalitha ayi-13 ngehora lamanzi ashisayo.
Umshini uhlinzeka ngezinhlobo ezine zamanzi amnandi.
Amanzi alungiselelwe angaba ngamakhaza, ashisayo noma amazinga okushisa egumbi, nawo angaba yi-carbonated.
Amanzi amnandi futhi anempilo alungiselelwe i-Hi-Class dispenser angathelwa ngqo emikhunjini yezindawo eziphakeme ezahlukahlukene. Lokhu kungenzeka ngenxa yokufakwa kwesiponji esishintshekayo kudivayisi.
Ukuhlanganiswa kwengilazi yesibuko esimnyama ngaphambili kwensimbi ngensimbi engagqwali kanye nephaneli yokulawula yobuhle ekhethekile ikuvumela ukuthi wakhe umklamo wanamuhla ongena kunoma iyiphi ingaphakathi, ngenkathi ngasikhathi sinye uhambisana nezici zokusebenza eziphezulu zedivayisi.
Isihlukanisi samanzi esingena-Pro-Stream cylinder
Isihlukanisi samanzi esingena-Pro-Stream cylinder ikuvumela ukuba ulungiselele amanzi abandayo, ashisayo futhi anekhabhoni ngesikhathi esifushane, esibonakaliswa ukunambitheka okuhle kakhulu.
Umsabalalisi wePro-Stream ubonakala ngokwakhiwa kwanamuhla nokusebenza okuphezulu, futhi ngenxa yekholomu efakwe ngumoya oshisayo nephaneli yokulawula ukuthinta, umhambisi kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Umsebenzisi unolwazi olucacile ngesimo sokusebenza sedivayisi ngenxa yemiyalezo ekhonjisiwe.
Isisebenzisi se-Pro-Stream singasebenza nge-boiler, epholile noma ngogesi. Ngenxa yesistimu elawula imodi yokusebenza yedivayisi, kungenzeka ukunciphisa ngokuzenzakalela ukusetshenziswa kwamandla.
Amanzi angafudunyezwa afike ku-98 ° C laphafuthi ukusebenza kahle kwedivayisi kuvumela ukugcwalisa izinkomishi ezifika ku-215 ngomthamo wama-250 ml ngehora. Ubuhle balesi sihambisi ngakho-ke yikhono lokulungisa ngokushesha zonke iziphuzo ezishisayo.
Inketho yokulungiselela amanzi abandayo nokukhazimula ihlinzeka ngamalitha amanzi ayi-15 ngehora.
Izitsha zamanzi zeJ-Class
Izitsha zamanzi zeJ-Class zibonakala ngekhwalithi ephezulu kakhulu etholakele ngenxa yokusetshenziswa kobuchwepheshe besimanje, obuqinisekisa ukusebenza okuthembekile nokusetshenziswa okuhlukahlukene kwemishini.
Le mishini isetshenziswa ngokulangazela emahhovisi, ezindaweni zokuphuzela utshwala, izindawo zokudlelanasemakhaya. Akhiqizwa ngokuhlukahluka okubili:
- TOP okuhlukile - ithuluzi lokufaka phezulu kwetafula
- inketho IN - ukufakwa ngaphansi kwethebula phezulu.
Umshini ulungisa izinhlobo ezine zamanzi:
kushisa ngokushisa kuze kufike ku-98 ° C
Idiski ye-J-Class inamakhono amabili: amalitha angama-30 wamanzi alungiselelwe ngehora namalitha angama-45 amanzi ngehora.
Isisabalalisi samanzi samahhala seNylgara Top
I-Niagara Top cylinder-free water dispenser iyithuluzi elihlala isikhathi eside, elisebenzayo futhi elinokwethenjelwa elilungiselela amanzi amasha futhi amnandi, lihlangabezana namazinga aphakeme kakhulu, angasetshenziswa ngempumelelo emahhovisi, ezindaweni zokusebenza nasemahhovisi.
INiagara Top Distributor izokusiza ukuxazulula noma yiziphi izinkinga eziphathelene nokulethwa nokugcinwa kwamanzi asemabhodleleni, kanye nokugcinwa kwamabhodlela epulasitiki angenalutho. Ngenxa yale divayisi yobungcweti, kungenzeka ukuthi unikeze abasebenzi namakhasimende amanzi ahlanzekile futhi anempilo, ngaphandle kokuphakelwa okuqhubekayo kwamanzi asemabhodleleni.
Lesi sabelo senzelwe ukusetshenziswa kuzo zonke izindawo zomphakathi, siqinisekisa ukusebenza okungenazinkinga lapho sisabalalisa ngisho nezinamba ezinkulu zokukhazimula futhi sisamanzi, sikuvumela ukuthi ugcwalise ngokushesha zonke izinhlobo zemikhumbi futhi unciphise izindleko zokuhlinzekwa nokugcinwa kwamanzi okuphuza.
-IN - ikhawunta engaphansi
Isigaxa samanzi esidonsela amanzi ngaphandle kwesilinda
Idrayivu yokuhambisa amanzi engenayo i-DRINK TOWER iyithuluzi elifanele ukulungiselela amanzi amaningi abandayo anempilo futhi amnandi, womabili futhi amenyezelayo. Le divayisi ilungele umkhakha wokudla, ezindaweni zokucima ukoma, ezindaweni zokudlela kanye nasemahhotela, isb.noma yikuphi lapho kudingeka khona ukulungiselela inani elikhulu lamanzi okuphuza asezingeni eliphakeme ngesikhathi esifushane.
Le divayisi ingahlanganiswa nanoma yiluphi uhlelo lwe-counter-counter.
Umsabalalisi we-DRINK TOWER wenziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme kakhulu, eqinisekisa ukusebenza okude, okungenazinkinga. Idizayini yayo ivumela ukuqoqwa kwenhlanzeko yamanzi okuphuza alungisiwe.
Isitsha sokuhambisa amanzi se-HylO esingenasilinda iyithuluzi lesimanje elenzelwe ukulungiswa kwamanzi abanda futhi anamnandi, aphuzayo futhi anekhabhoni, kanye namanzi okushisa asekamelweni. Ubukhulu be-compact, ukwakheka kwanamuhla nokusebenza okubonakalayo izinzuzo zale divayisi, ezitholakala ezinhlotsheni ezimbili:
- Ithebula phezulu - TOP
- I-under-counter nge-spout - IN.
I-9 lisisulu samanzi esidonsa ngaphandle kwesilindaidivaysi yokufulela amanzi yasekhayaisitsha samanzi sasekhayaisitsha samanziUmshini wokuhambisa amanzi ongu-5lumhlinzeki wamanzi we-allegrointengo yokuhambisa amanziisitsha samanzi sezinganeisabalalisa samanzi akhanyekayoisitsha sokuhambisa amanzi iWarsawisitsha sokuhambisa amanzi ashisayoisitsha samanzi5l isitsha samanziIsitsha samanzi se-Allegroisitsha samanzi esingenabhodlelaintengo yokuhambisa amanziisitsha semvelo sokuhambisa amanziintengo yemvelo yokusabalalisa amanziisitsha samanzi sezinganeisitsha samanzi sehhovisiisitsha samanzi sasekhayaintengo yokusabalalisa amanzi yasekhayaisitsha sokuphuza amanzieden isitsha samanziincwajana yokudonsela amanzi edenisitsha sokuhambisa amanzi se-carbonatedintengo yokuhambisa amanzi ekhazimulayoisitsha sokuhambisa amanzi se-carbonated sekhayaokhipha amanzi ukuthi isebenza kanjaniisitsha samanzi iKrakakisimbiwa samanzi amamineralioasis okhipha amanziumhlinzeki wamanzi we-olxisitsha sokuphuza amanziisitsha samanzi ngesiNgisiumshini wokuhambisa amanzi wesiphephoisitsha samanzi esiqandisiniisitsha samanzi esiqandisini ukuthi sisebenza kanjaniisitsha sokuhambisa amanzi iWarsawisitsha sokuhambisa amanziubukhulu be-dispenser yamanziindawo yokuqasha amanziintengo yokuqasha amanziisitsha sokuhambisa amanzi se-co2isipompo sokuhambisa amanziisitsha samanzi esiqandayookuhambisa amanzi kusuka kunethiwekhiabahambisa amanziabahambisa amanzi ezinkampaniniabahambisa amanzi amamineraliabasabalalisi bamanzi entwasahloboIsitsha esisodwa samanziisitsha sokuhambisa amanzi esiqandisiniipompo yamanzi 5 gallon dispenser ibhodlela le-18ithuluzi lokuhlunga nokufaka amanzi kwe-gassingithuluzi lamanzi we-gassingidivaysi ye-gassing water allegroamanzi i-carbonation device ceneo